Cenit : Hamoaka ny datim-pifidianana amin’ny Zoma – MyDago.com aime Madagascar
Cenit : Hamoaka ny datim-pifidianana amin’ny Zoma
Raha tsy misy ny fiovana, hamoaka ny datim-pifidianana vaovao ny eo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ho an’ny tetezamita (Cenit) ny zoma izao. Nambaran’ny loharanom-baovao fa efa manana drafitra momba izany tetiandro vaovao izany ny eny Alarobia, tamin’ny fivorian’izy ireo farany, niaraka tamin’ny Firenena Mikambana (ONU) sy ireo mpiara-miombon’antoka amintsika. Anisan’ny hanafaingana izany ny fahatongavan’ny iraky ny Sadc, tarihin’I Chissano eto amintsika.
Hatreo amin’ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka ihany anefa izany tetiandro izany noho ny tsy mbola nandanian’ny parlemanta ny namaritra ny lalàna ho an’ny fifidianana ben’ny tanàna.
Na izany aza, iandrasana ny mety ho filaminan’ny tontolo politika, ny ho avin’ny tetiandrom-pifidianana.
AOKA ISIKA HANORATRA ANARANA AMIN ‘NY LISIM-PIFIDIANANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 31 juillet 2013 31 juillet 2013 Catégories Politique
Précédent Article précédent : SOLAHIMENA : MAMPIHITSOKA NY TOLONA AMIN’IZAO FOTOANA IZAO DIA NY TAFIKA SY ZANDARY
Suivant Article suivant : Eric Rakotoarisoa : “Tsy tokony hiova ny didim-pitsaran’ny CES »